> Resource> Mac> Best iTunes Nnọchi maka Mac OS X
Ị na-achọ software dochie iTunes on Mac, otú i nwere ike jikwaa faịlụ ma na Mac na gị iPhone, iPod aka, ma ọ bụ iPad mfe? -Eme ihe n'eziokwu, iTunes dị mma na-anapụta media faịlụ site na Mac ka iDevices na ijikwa media faịlụ na Mac. Otú ọ dị, ọ na-apụghị nyefee media faịlụ site na iDevices ka Mac nke bụ karịsịa manụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee songs na-adị na ngwaọrụ gị iTunes ma ọ bụ jiri mgbasa ozi faịlụ na ngwaọrụ wughachi iTunes Library. Ebe a ga-amasị m ike ikwu na ị na-iTunes Nnọchi maka Mac - Wondershare TunesGo (Mac). Ọ na-eme ma ihe iTunes nwere ike na-apụghị ime ka mgbasa ozi faịlụ.
Download iTunes Nnọchi maka Mac inwe a na-agbalị!
Cheta na: The iTunes Nnọchi maka Mac-akwado ndị niile ụdị nke iPhone, iPod aka, na iPad na-agba ọsọ iOS 5/6/7. Ọ na-ahapụ gị mbupụ music na listi ọkpụkpọ site na iPod kpochapụwo, iPod ịkpọgharịa na iPod nano ka Mac na iTunes. The iTunes Nnọchi maka Windows ikpe mbipute bụ dịnụ. Ọ nwere ihe atụmatụ karịa Mac iTunes ndochi. Ọ bụrụ na ị nwere a Windows PC, i nwere ike ịgbalị ya.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a omume dochie iTunes, ọ ga-eme ihe iTunes dara ogbugba - ebufe media faịlụ site na iOS ngwaọrụ Mac ma jikwaa faịlụ na ngwaọrụ. Nke a bụ ihe iTunes Nnọchi maka Mac-eme.
Nyefee music si Apple ngwaọrụ iTunes Library. Mgbe ị Ijikọ Apple ngwaọrụ na kọmputa na ẹkedori a iTunes Nnọchi Mac software, ke akpan window, ị pụrụ ịhụ nhọrọ "Iji iTunes". Pịa ya, mgbe ahụ, ị ga-ahụ na ihe niile songs na ngwaọrụ gị e zigara iTunes Library on Mac. Iji nyefee họrọ songs ka iTunes, na Music window, ị nwere ike họrọ song na pịa "Mbupụ na iTunes". Ọ bụrụ na a song ka ikodu ke iTunes, mgbe ahụ iTunes icon tupu ya ga-pụta ìhè.
Ndabere na vidiyo si na iOS ngwaọrụ Mac. Na nke a iTunes nnọchi, ị nwekwara ike ndabere ma iOS ngwaọrụ dere na vidio ndị a gị ebudatara kpọmkwem na ngwaọrụ gị Mac.
Export foto site na iOS ngwaọrụ Mac. Ọ bụrụ na ị na-eji ihe iOS ngwaọrụ dị ka a n'akpa uwe igwefoto, i nwere ike iji mbupụ photos mgbe nile iji onwe elu ohere ma ọ bụ n'ihi na ihe edit. iTunes Nnọchi ngwa na-ahapụ gị mbupụ foto site na iOS ngwaọrụ Mac na ogbe.
iTunes Nnọchi maka Mac ngwa ọ bụghị nanị na-enye gị ohere ime ihe n'elu kwuru banyere ihe, ọ na-enyere gị jikwaa faịlụ na iPhone. Ị nwere ike wepụ na-achọghị songs, foto, na videos, ịmepụta listi ọkpụkpọ, tinye foto album, na na.
Dị ka ihe nnọchi ngwa n'ihi na iTunes on Mac, Wondershare TunesGo (Mac) na-enyere gị nyefee songs, videos, foto site na Mac ka iOS ngwaọrụ. Ma ọ bụrụ na ihe ọdịyo ma ọ bụ video faịlụ na-adịghị gị na-akwado iOS ngwaọrụ, TunesGo (Mac) ga-atụgharị ya n'ime ngwaọrụ gị enyi na enyi format n'oge na-ebufe usoro.
Gbalịa iTunes Nnọchi ugbu a!
Best iTunes Companion to mejupụtara ihe iTunes Ike Ime
Olee otú iyi Video si Mac ka PlayStation3
AnyDVD Mac? Download a usoro dị ka AnyDVD maka Mac